ဖတျရသူတှေ ရငျထဲမှာပါ စို့နဈပွီး ဝမျးနညျးသှားစေ တဲ့ ကှယျလှနျသူ မွသှဲ့သှဲ့ခိုငျ အတှကျ G Fatt ရဲ့ ဆုတောငျးစကားလေး – Let Pan Daily
ဖတျရသူတှေ ရငျထဲမှာပါ စို့နဈပွီး ဝမျးနညျးသှားစေ တဲ့ ကှယျလှနျသူ မွသှဲ့သှဲ့ခိုငျ အတှကျ G Fatt ရဲ့ ဆုတောငျးစကားလေး
Let Pan | February 21, 2021 | Celebrity | No Comments
ပရိသတျတှခေဈြတဲ့ နိုငျငံကြျော အနုပညာရှငျတှေ ကတော့ လကျရှိ မွနျမာ့ ပွညျတှငျးရေး အတှကျ လှုပျရှားနကွေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ လူငယျ အဆိုတျော G Fatt ကလညျး လကျရှိ မွနျမာပွညျတှငျးမှာ ဖွဈပကျြနတေဲ့ ပွညျသူ့အစိုးရကို ဖမျးစီးထားတဲ့ စဈအာဏာရှငျတှကေို ငွိမျးခမျြးစှာ ဆန်ဒပွနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။မနကေ့ ဖဖေျောဝါရီလ (၁၉) ရကျနမှေ့ာတော့ နပွေညျတျော သပွကေုနျးမှာ ဆန်ဒပွရငျး ဦးခေါငျးကို သနေတျကညျြဆနျထိမှနျသှားတဲ့ မွသှဲ့သှဲ့ခိုငျတဈယောကျ ကှယျလှနျသှားခဲ့ပွီဖွဈပွီး G Fatt က သူ့ရဲ့ညီမအရှယျသာရှိသေးတဲ့ မွသှဲ့သှဲ့ခိုငျအတှကျ အခုလိုပဲ ဆုတောငျးပေးထားတာကိုတှရေ့ပါတယျ။
“ညီမလေးရေ သံသရာက မလှတျသရှေ့ ဒီလိုနိုငျငံမှာ လူပွနျ မဝငျစားပါစနေဲ့ေ တော့ကှယျ . အကိုတို့ ညီမလေးကို အာဇာနညျအဖွဈ လေးစားဂုဏျပွုနမှောပါ ညီမလေးက ၁၉နှဈတဲ့..ဘဝမှာ ကိုယျရူးသှပျခငျြရာကို တဈစိုကျမကျမကျရူးသှပျလို့ရတဲ့အရှယျပေါ့ကှယျကောငျးရာဘုံဘဝမှာ ရောကျရှိ နားခိုပါစကှေယျ။ အကိုပွုဖူးသမြှ ကုသိုလျတှေ အမြှပါကှယျ မိသားစု နဲ့ထပျတူကွကှေဲရပါတယျ .. ညီမလေး အျောဟဈတောငျးတ ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရစေီ ၊ သမ်မတကွီးနဲ့ အမစေု လှတျမွောကျရေး အဈကိုတို့ ဆကျတိုကျပှဲဝငျတောငျးဆိုသှားမယျညီမလေးရေ ..”ဆိုပွီး ဆုတောငျးပေးထား တာကို တှရေ့ပါတယျ။
G Fatt ကတော့ ကှယျလှနျသူ လေး မွသှဲ့သှဲ့ခိုငျ အတှကျ ဆုတောငျး ပေးထားတဲ့ ဆုတောငျး စကားလေးကတော့ ဖတျရသူတှရေငျထဲ မှာပါ စို့နဈပွီး ဝမျးနညျးသှားစတော အမှနျပါပဲ။ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီး အားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုက်ပါတယျနျော။
ပရိသတ်တွေချစ်တဲ့ နိုင်ငံကျော် အနုပညာရှင်တွေ ကတော့ လက်ရှိ မြန်မာ့ ပြည်တွင်းရေး အတွက် လှုပ်ရှားနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ် အဆိုတော် G Fatt ကလည်း လက်ရှိ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ပြည်သူ့အစိုးရကို ဖမ်းစီးထားတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၉) ရက်နေ့မှာတော့ နေပြည်တော် သပြေကုန်းမှာ ဆန္ဒပြရင်း ဦးခေါင်းကို သေနတ်ကျည်ဆန်ထိမှန်သွားတဲ့ မြသွဲ့သွဲ့ခိုင်တစ်ယောက် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး G Fatt က သူ့ရဲ့ညီမအရွယ်သာရှိသေးတဲ့ မြသွဲ့သွဲ့ခိုင်အတွက် အခုလိုပဲ ဆုတောင်းပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
“ညီမလေးရေ သံသရာက မလွတ်သရွေ့ ဒီလိုနိုင်ငံမှာ လူပြန် မဝင်စားပါစေနဲ့ေ တော့ကွယ် . အကိုတို့ ညီမလေးကို အာဇာနည်အဖြစ် လေးစားဂုဏ်ပြုနေမှာပါ ညီမလေးက ၁၉နှစ်တဲ့..ဘဝမှာ ကိုယ်ရူးသွပ်ချင်ရာကို တစ်စိုက်မက်မက်ရူးသွပ်လို့ရတဲ့အရွယ်ပေါ့ကွယ်ကောင်းရာဘုံဘဝမှာ ရောက်ရှိ နားခိုပါစေကွယ်။ အကိုပြုဖူးသမျှ ကုသိုလ်တွေ အမျှပါကွယ် မိသားစု နဲ့ထပ်တူကြေကွဲရပါတယ် .. ညီမလေး အော်ဟစ်တောင်းတ ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ၊ သမ္မတကြီးနဲ့ အမေစု လွတ်မြောက်ရေး အစ်ကိုတို့ ဆက်တိုက်ပွဲဝင်တောင်းဆိုသွားမယ်ညီမလေးရေ ..”ဆိုပြီး ဆုတောင်းပေးထား တာကို တွေ့ရပါတယ်။
G Fatt ကတော့ ကွယ်လွန်သူ လေး မြသွဲ့သွဲ့ခိုင် အတွက် ဆုတောင်း ပေးထားတဲ့ ဆုတောင်း စကားလေးကတော့ ဖတ်ရသူတွေရင်ထဲ မှာပါ စို့နစ်ပြီး ဝမ်းနည်းသွားစေတာ အမှန်ပါပဲ။ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက္ပါတယ်နော်။
“ချစ်သူ က ဆုံးသွား ပေမဲ့ တန်ခိုးရှင်ကြီး ဖြစ်နေပြီး ကိုယ့်ကို လိုက်စောင့်ရှောက်နေတယ် လို့ ခံစားရတယ် ” လို့ သူမ ရဲ့ ချစ်သူအကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်း
အိပ်ရာထက် မှာ ညှို့အားပြင်းတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ အလန်းစား ပို့စ်လေးတွေပေးနေပြီး ရင်ခုန်ချင် စရာကောင်းနေတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း
မဖြစ်မနေ အပြင် ထွက်ရရင် အကာအကွယ်လေး နဲ့ Mask တွေသုံးဖို့ စိတ်ပူစွာ သတိပေး လာတဲ့ အိချောပို